​မေးခွန်းကြီးနှစ်​ခု – Kyaw Zaw Oo's Blog
April 27, 2022 April 27, 2022 web_master
နစက (SAC) က (NUG/PDFs မပါ) EAO များအား ဗိုလ်​ချုပ်​မှူးကြီးမင်း​အောင်​လှိုင်​ ကိုယ်​တိုင်​​တွေ့ဆုံ​ဆွေး​နွေးမည်​ဖြစ်​သည့်အတွက်​ ​မေလ ကိုးရက်​​နေ့​ နောက်​ဆုံးထား စာရင်း​ပေး​စေလို​သည်​ဟု ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်​​ဖော်​​ပြောကြားထား​သည်​ကို သိရှိထားကြရပါသည်​။
ပြဿနာများကို အမှန်​တကယ်​​ဖြေရှင်းလိုသည့် စိတ်​​စေတနာအရင်းခံရှိသည်​ဆိုငြားအံ့ – နစက ဘက်​မှ ထိ​တွေ့ဆက်​ဆံရန်​ကြိုးစားရမည့် ကိစ္စကြီးနှစ်​ရပ်​ (သို့မဟုတ်​) ​မေးခွန်းကြီးနှစ်​ရပ်​ရှိနေသည်​။ ကိုကိစ္စနှစ်​ရပ်​ကို အနှစ်​သာရ (substance) အရ ချဉ်းကပ်မှု မရှိပါက အချိန်​များကို နှ​မြောဖို့​ကောင်းသည်​ ဟု သ​ဘော​ပေါက်​တတ်​ရမည်​ ဖြစ်​​လေသည်​။
တစ်​။ စစ်​မှန်​​သော ဖက်​ဒရယ်​ပြည်​​ထောင်​စု (သို့) ကွန်​ဖက်​ဒရိတ်​များအစုအ​​ဝေး အဖြစ်​ မည်​ကဲ့သို့ ပုံ​ဖော်​ကြမည်​နည်း ? ဆိုသည့် အချက်​ နှင့် –
နှစ်​။ စစ်​ဘက်​အ​ပေါ် အရပ်​ဘက်​က အမှန်​တကယ်​ ပြည်​သူစစ်​စစ်​ ကိုယ်​စားပြု စနစ်​ဖြင့် စိုးမိုးမှု (objective civilian control of the military) တည်​​ဆောက်​ကြနိုင်​ရန်​အလို့ငှာ စစ်​သားများ နိုင်​ငံ​ရေးမှ မည်​သို့ ထွက်​ခွာမည်​နည်း ဆိုသည့် အ​ရေး တို့ ဖြစ်​ကြသည်​။
အကယ်​၍ ထိုအ​ကြောင်းအရာများကို ထိ​တွေ့မှု မရှိဘဲ အခြားအ​ကြောင်းအရာများကိုသာ​ ပြောကြား​နေခြင်းဖြစ်​ပါက – ယင်းတို့မှာ ကာလတို အချိုသပ်​​ရေး (အပြန်​အလှန်​?) ချဉ်းကပ်​မှု အဖြစ်​​သော်​လည်း​ကောင်း၊ ပင်​မသို့မ​ရောက်​​သေးသည့် နိဒါန်းချီစကားများ အဖြစ်​​သော်​လည်း​ကောင်း၊ အ​ရေးပါမှုဒီဂရီ နည်းသည့်ကိစ္စများအဖြစ်​​သော်​လည်း​ကောင်း၊ အပရိက စကားများအ​နေဖြင့်​သော်​လည်း​ကောင်း မှတ်​ယူနိုင်​သည့်သ​ဘောရှိနိုင်​ပါသည်​။
နံပါတ်​တစ်​အချက်​ကို စဉ်းစားရာတွင်​ ​မေ့ချင်​ယောင်​​ဆောင်​ပြီး ထည့်စဉ်းစားခြင်းမပြုဘဲ​နေလို့မရသည့် အခြင်းအရာ အချို့ရှိပါသည်​။ ယင်းအခြင်းအရာတို့အနက်​ အချို့မှာ – ဗမာပြည်​နယ်​ ဖွဲ့စည်း​ရေး ဆိုသည့်ကိစ္စ နှင့် မည့်သည့် EAO ကမှ လက်​နက်​ဖြုတ်​သိမ်းလိမ့်မည်​မဟုတ်​ ဆိုသည့် အ​ခြေခံအထိုင်​ကိုယူကာ အနာဂတ်​ နိုင်​ငံ (သို့မဟုတ်​) နိုင်​ငံ​ယောင်​ကို တည်​​ဆောက်​ရန်​ စဉ်းစားကြရ​တော့မည့် အ​ခြေအ​နေ ​ရောက်​​နေပြီလား ဆိုသည့်အ​ကြောင်း အပါအဝင်​ ဖြစ်​ကြပါသည်​။
ဗမာပြည်​နယ်​ကိစ္စအားဖြင့် ဗမာလူထုမှာ ယခုမှ shock ရခါစ ရှိ​သေးသည်​။ shock အလွန်​ အသားကျသည့် ကာလ​ရောက်​ရန်​ များစွာလို​သေးသည်​။
EAO များတက်​သင့်မတက်​သင့် ကိစ္စ အပါအဝင်​ အခြား ဆက်​စပ်​အ​ကြောင်းအရာများစွာ ရှိပါ​သော်​ငြားလည်း ဤစာစုတွင်​ မ​ဆွေး​နွေးလိုပါ။
End Notes and External links
Tag: လူငယ်များအတွက် နိုင်ငံရေးမှတ်စုတိုများ
Arakan-related Books and Documents / ရခိုင်​​ရေးရာ စာအုပ်​စာတမ်းများ
The Mog Nation Wiki
The Mog Nation Wiki | fandom
Kyaw Zaw Oo’s Blog
Kyaw Zaw Oo | Facebook
ကျော်ဇောဦး | Facebook
Kyaw Zaw Oo | Twitter
Previous လူမျိုးနာမည်​လိမ်​ လက်​ခံမှုနှင့် ပြည်​နယ်​တစ်​ခုချင်းသ​ဘောထား
Next ဦးခွန်​ထွန်းဦးအတွက် ဝမ်းနည်း​ကြောင်းစကား